မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအလှမယ်အဖြစ်နဲ့ အားပေးမှုထောက်ခံမှုတွေကို ရလာခဲ့တဲ့ Miss Universe Myanmar သူဇာဝင့်လွင် – Cele Snap
မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအလှမယ်အဖြစ်နဲ့ အားပေးမှုထောက်ခံမှုတွေကို ရလာခဲ့တဲ့ Miss Universe Myanmar သူဇာဝင့်လွင်
မြန်မာ့ဂုဏ်ကိုဆောင်မယ့် Miss Universe Myanmar (2020) Winner ဆုရှင် သူဇာဝင့်လွင်ဟာ သူမရဲ့လှပကျော့ရှင်းမှုကြောင့် နိုင်ငံတကာက အားပေးထောက်ခံသူတွေကိုပါ ရလာခဲ့ပါတယ်။ အမဖြစ်သူ မေဟာလည်း အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အောင်မြင်မှုရနေသလို သူဇာဝင့်လွင်ဟာလည်း သူမရဲ့အရည်အချင်းတွေကို အပြည့်အဝ ဖော်ထုတ်ခွင့်ရမယ့် Miss ပြိုင်ပွဲအတွက် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ကိုဆောင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။
ညီမလေးရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေတဲ့မေဟာ မိဘတွေဂုဏ်ယူရအောင် ပွဲကိုမရောက်ရောက်အောင်သွားပြီး ညီမလေးနဲ့အတူဓာတ်ဖမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။ ညီမနှစ်ယောက်လုံးက ထွန်းပေါက်အောင်မြင်သူတွေဖြစ်ခဲ့တာမို့ မိဘတွေအတွက်တော့ ပီတိဖြစ်စရာပါပဲ။ သွယ်လျလှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတွေပြည့်လွန်းနေတဲ့ မျက်နှာလှလှလေးဟာ ကမ္ဘာ့အလည်မှာ မြန်မာဆိုတာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထုတ်ဖော်မယ့်ပုံစံအပြည့်ပါပဲ။
သူမရဲ့စွဲမက်ဖွယ်ပုံရိပ်တွေကို မိတ်ကပ်မေဦးက ” Miss Universe Myanmar ဆိုပြီး International ကလူတွေပါဝန်းရံနေကြပြီ နော်ကိုယ်တွေ Team Myanmar က လူတွေကရော? ” ဆိုပြီး ဝေမျှပေးခဲ့ပါတယ်။ နဂိုရှိပြီးသား အလှအပလေးဟာ အပြင်အဆင်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်ချိန်မှာ တော့ ပိုပြီးတောက်ပသွားတဲ့ Miss Universe Myanmar သူဇာဝင့်လွင်ရဲ့ ငြို့အားပြင်း ပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မွနျမာ့ဂုဏျကိုဆောငျမယျ့ Miss Universe Myanmar (2020) Winner ဆုရှငျ သူဇာဝငျ့လှငျဟာ သူမရဲ့လှပကြော့ရှငျးမှုကွောငျ့ နိုငျငံတကာက အားပေးထောကျခံသူတှကေိုပါ ရလာခဲ့ပါတယျ။ အမဖွဈသူ မဟောလညျး အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပွီး ကိုယျပိုငျလမျးကွောငျးပျေါမှာ အောငျမွငျမှုရနသေလို သူဇာဝငျ့လှငျဟာလညျး သူမရဲ့အရညျအခငျြးတှကေို အပွညျ့အဝ ဖျောထုတျခှငျ့ရမယျ့ Miss ပွိုငျပှဲအတှကျ နိုငျငံ့ဂုဏျကိုဆောငျဖို့ အသငျ့ဖွဈနခေဲ့ပါပွီ။
ညီမလေးရဲ့အောငျမွငျမှုအတှကျ ဝမျးသာမဆုံးဖွဈနတေဲ့မဟော မိဘတှဂေုဏျယူရအောငျ ပှဲကိုမရောကျရောကျအောငျသှားပွီး ညီမလေးနဲ့အတူဓာတျဖမျးခဲ့ပါသေးတယျ။ ညီမနှဈယောကျလုံးက ထှနျးပေါကျအောငျမွငျသူတှဖွေဈခဲ့တာမို့ မိဘတှအေတှကျတော့ ပီတိဖွဈစရာပါပဲ။ သှယျလလြှပတဲ့ခန်ဓာကိုယျနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုတှပွေညျ့လှနျးနတေဲ့ မကျြနှာလှလှလေးဟာ ကမ်ဘာ့အလညျမှာ မွနျမာဆိုတာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထုတျဖျောမယျ့ပုံစံအပွညျ့ပါပဲ။
သူမရဲ့စှဲမကျဖှယျပုံရိပျတှကေို မိတျကပျမဦေးက ” Miss Universe Myanmar ဆိုပွီး International ကလူတှပေါဝနျးရံနကွေပွီ နျောကိုယျတှေ Team Myanmar က လူတှကေရော? ” ဆိုပွီး ဝမြှေပေးခဲ့ပါတယျ။ နဂိုရှိပွီးသား အလှအပလေးဟာ အပွငျအဆငျတှနေဲ့ပေါငျးစပျလိုကျခြိနျမှာ တော့ ပိုပွီးတောကျပသှားတဲ့ Miss Universe Myanmar သူဇာဝငျ့လှငျရဲ့ ငွို့အားပွငျး ပုံရိပျတှကေို ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
(၁၆) နှစ်ကျော်လာတဲ့ သက်တမ်းမှာ ထူးချွန်ဆုတွေအများကြီးမရခဲ့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေရဲ့မေတ္တာကြောင့် ကျေနပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အိမ့်ချစ်
ပန်းရောင်ခြယ်နဲ့ဖုန်းကြော်ငြာရိုက်ကွင်းထဲက အမှတ်တရ ဗီဒီယိုလေးကို ပရိတ်သတ်ကြီးတွေထံ ပြန်လည်မျှဝေလာတဲ့နေတိုး